people Nepal » पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर, उपचारका लागि थप ६० लाख दिने सरकारकाे निर्णय पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर, उपचारका लागि थप ६० लाख दिने सरकारकाे निर्णय – people Nepal
पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर, उपचारका लागि थप ६० लाख दिने सरकारकाे निर्णय
Posted on August 29, 2016 September 3, 2016 by Durga Panta
१३ भदौ, काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई क्यान्सर भए पछि उपचारका लागि भन्दै थप ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।
यादवलाई हालै भारतमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा प्रोस्टेट क्यान्सर देखिएको चिकित्सकले वताएका छन् । थप उपचारका लागि उनी अमेरिका जाने तयारीमा छन् । यादवको सेम्टेम्बर तेस्रो हप्ता हेनरीफोर्ड सेन्टरमा उपचार हुने निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
यादवको सबै उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ । सरकारले दिएको यो ६० लाख पेश्की मात्र रहेको वताईएको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार यादवको उपचारमा ३ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ ।
यसअघि भारतमा उपचार गराउन जाने क्रममा पनि सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यद्यपि नेहरु अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरिदिएको थियो । उक्त अस्पतालको शिक्षण अस्पतालमा यादव आफैंले अध्ययन गरेका थिए ।
सरकारले पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवलाई ६० लाख उपचार खर्च बाहेक जाने, आउने विजनेश क्लासको टिकट, दैनिक ३०० डलर भत्ता पनि दिनेछ । साथै उनका तीन जना सहयोगीलाई हवाइ टिकट र दैनिक १५० डलर दैनिक भत्ता दिने सरकारको निर्णय छ ।